IFTIINKACUSUB.COM: Ma guursan lahayd gabadh Indha’la,Dhago’la,aan hadlin ,curyaanna ah ?
Ma guursan lahayd gabadh Indha’la,Dhago’la,aan hadlin ,curyaanna ah ?
Qisso laga soo wareyay dadkii hore :Asad Adaani Ibraahim ,Wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah wuxuu ag marayey Beer weyn dhinaceeda, waxa uu arkay xabad Tufaax ah oo Geed beerta ka mid ah ka soo dhacday. Xabbadii Tufaax ahayd ayuu cunay baahi markaasi haysay awgeed, markuu dhamaystay ayuu xasuustay in aanu iibsan, qofkii lahaana ka fasax qaadan.
Wiilkii dhalinyarada ahaa waa ka daba dhaqaaqay isaga oo aad uga baryaya in uu cafiyo kana tuugaya in uu saamaxo, ninkii gurigiisii ayuu galay , wiilkiina isaga oo murugaysan ayuu gurigii ninka ag fadhiistay , salaadii casar markii La gaadhay ayuu ninkii soo baxay mise wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu ku sugayaa guriga hortiisa, wuxuu haddana ka codsaday in uu saamaxo.